समाचार प्रभाब, गाउँघरका सोझासाझा ब्यक्तिको नगरिकता बटुलेर शेयर आवेदन ! सम्पति शुद्धीकरणमा पठाउने ! – Palika Express
समाचार प्रभाब, गाउँघरका सोझासाझा ब्यक्तिको नगरिकता बटुलेर शेयर आवेदन ! सम्पति शुद्धीकरणमा पठाउने !
PalikaExpress २२ पुष २०७७, बुधबार 819 पटक हेरिएको
काठमाडौं । सुचिकृत कम्पनीले जारी गर्ने प्राथामिक सेयर निस्कासनमा गाउँघरका सोझासाझा ब्यक्तिको नागरिकताको आधारमा बैक खाता खोलेर दरखास्त गर्ने प्रवृति रोक्ने गृहकार्य सुरु गरिएको छ । यस यस अघि गाउँघरका सोझासाझा ब्यक्तिको नगरिकता बटुलेर शेयर आवेदन ! भन्ने सिर्सक मा पालिका एक्सप्रेसले खोज अनुसन्धान गरेको थियो। तसर्थ नियामक निकाय को ध्यान केन्द्रित भएको छ। विभिन्न कम्पनीको आर्ईपीओ जारी हुने क्रम धमाधम चलिरहेको र एकै जनाले सयौ व्यक्तिको नामबाट आर्ईपीओ भर्ने ‘बोरे प्रवृत्ति’ फस्टाउन थालेपछि नियामक निकायले यस्लाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो । अर्काको नागरिकता ल्याएर उस्को नाममा बैक खाता खोली सोही आधारमा डिम्याट खाता मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा नदिकन सेयरमा अनलाइन दिने बिक्रृती बढेको छ ।
समाचार प्रभाब, यस्तो थियो समाचार
प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा गाउँघरका सोझासाझा ब्यक्तिको नगरिकता बटुलेर शेयर आवेदन ! दिएको हो कि भन्ने आसंका बढेको छ। इन्स्योरेन्समा १० लाख बढी आवेदन कसरि आए ? कतै हामी सोझासाझा जनताको बैंक, खाता, डिम्याट कसैले थाहै नदिकन आफू खुसी प्रयोग त गरेनन ? यो छानबिनको विषय हुन सक्छ । नियमक निकायको ध्यान केन्द्रित होस। इन्स्योरेन्सको साधारण शेयरमा परेको आवेदनबाट सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कसरी यति धेरै आवेदन आयो ? आवेदन दिने ब्यक्ती सबैलाई आफुले शेयरमा आवेदन दिएको भन्ने थाहा होला र ? यो पक्कै पनि छनबिनको बिषय बनेको छ । कसैले थाहा नदिकन शेयर भरेको रहेछ भने पुरै शेयर जफत गरि कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्यो/ गर्नुपर्ने। प्रभु लाईफ इनस्योरेन्समा आवेदक संख्याले नया किर्तिमानी रचे संघि यो खोजनिया बिषय भएको छ । खुलेका शेयरहरुमध्य अहिले सम्मकै धेरै मात्रामा करिब १० लाख ५० हजार हाराहारीमा आवेदकको आवेदन परेको छ । आवेदन दिने बिहीबार सम्म अन्तिम दिन थियो । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार बिहिबार ४ः३० बजेसम्ममा १० लाख ४४ हजार आवेदनबाट २ करोड ७७ लाख शेयरको लागि आवेदन परेको छ । यो कम्पनीले सर्वसाधरणलाई निष्काशन गरेको ५४ लाख कित्ताको ५.१२ गुणा बढी हो । गोला प्रथाबाट आवेदन दिने करिब ५० प्रतिशतलाई १० कित्ताको दरले शेयर दिइने छ भने बाकिको हात खाली हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको अध्यनले देखाएको समाचारको सोहि आधारमा हाम्रो टीमले खोज अनुसन्धान गरेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ हाउस, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतको सहभागितामा यो प्रवृत्ति रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाईको छ । पहिले लाइन लागेर आईपीओ भर्ने समयमा एक जना व्यक्तिले नै धेरै जनाको नाममा सेयर भर्ने गरेकोमा अहिले डिम्याट अनिवार्य गरिसकेपछि पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । झोले प्रवृति लाइ कानुनी दायरामा ल्याउन उक्त कार्यमा संलग्नहरुको सुक्ष्म निगरानीे गरिरहेको नियामक निकायले बताएको छ । बोर्डबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएको र ई–केवाईसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुर्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन ।
ई–केवाइसी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसले पनि नभए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउने जस्ता बिषयमा गहृकार्य भैरहेको, अरुका नाममा बैंक खाता खोल्ने, सेयर भर्ने, त्यसको पूर्ण लाभ सम्बन्धित् व्यक्तिलाई थाहा पत्तो नदीकन आफैं लिनेलाई सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउन सकिनेबारे बोर्डमा छलफल समेत भैसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले साधारण सभाको आह्वान,बुक क्लोज मितितय